ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : 101010 English
၁၀ ရက် ၁၀ လ ၁၀ ခုနှစ် ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ အားနေ တဲ့ အချိန်လေး ဆားချက်လိုက်တယ်။
4 types of sentences အင်္ဂလိပ်ဝါကျ ၄မျိုးအကြောင်းပါ။
[Interrogative, Declarative, Imperative, Exclamatory] Sentences
Interrogative sentence မေးခွန်းတွေပါတဲ့ ဝါကျပါ။
What should I wear tonight? ဒီနေ့ ည ဘာဝတ်ရမလဲ။
Why is this homework so hard? ဘာ့ကြောင့် အိမ်စာတွေ သိပ်ခက်တာလဲ။
Are you going to marry him? နင်သူ့ ကိုလက်ထပ်မှာလား
Declarative sentences (Declare ဆိုတာက ကြေငြာတာပါ) ဘာလုပ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့ ဝါကျဖြစ်ပါတယ်။
(declarative sentences that formastatement)
The children are readingabook. ကလေးတွေ စာကြည့်နေကြတယ်။
She is reporting the news. သူမ သတင်းပေးနေတယ်။
I am sorry Sir, you can't come in now, I am about to close my shop. (ဆောရီးပါဘဲဗျာ။ အခု ခင်ဗျားဝင်လာလို့ မရတော့ဘူး ကျွန်တောအခုဘဲဆိုင်ပိတ်တော့မလို့ )
Imperative sentence (တောင်းဆိုခြင်၊ အမိန့် ပေးခြင်း ပါသော ဝါကျဖြစ်သည်)
(request or command)
Leave mealone င့ါကိုလာမနှောက်ယှက်နဲ့ ။ အေးအေးဆေးဆေး ငါတစ်ယောက်ထဲ နေပါရစေ။
Kiss me ငါ့ကိုနမ်းစမ်း
Don’t tell anyone my secret. ငါ့ရဲ့ လျှို ဝှက်ချက်ကို ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောနဲ့ ။
နည်းနည်း ဒေါသသံပါတာမျိုး ။ တော်တော်လဲအပေါ်စီးကနေ ခိုင်းတဲ့ ဝါကျမျိုး ။ အပစ်ပုံချတာမျိုး။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောချင်တာ မျိုး တွေ မှာ
You need to get your act together and I mean now! လုပ်စရာရှိတာကို သေချာလုပ် ငါနင့်ကို အတည်ပြောတာ
Get up and give me 20 more push ups. အခုထပြီး ထိုင်ထ အခါ၂၀ လုပ်ပြစမ်း
I am so upset! I hate you. ငါနင့် ကို ဒေါသထွက်တယ်။ နင့်ကိုမုန်းတယ်။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, October 10, 2010
JUSTICE999BURMA 11 October 2010 at 06:05
JUSTICE999BURMA 11 October 2010 at 06:06
ငပိပါချက်ဟေ......... ငါတော့ ငပိထောင်း လိုက်တယ်... :D
ရိုးရိုး 11 October 2010 at 15:13
ဆား ချက်ပါတယ် ဆိုနေ မှ ငပိချက်တယ်ပြောနေပါရောလား။ အကြံကုန်လို့ဂလုံ ဆားချက်တာလေ။ လကြီး မပေါင်းတယ်လို့ဂလုံကွာ ။ တောင်ပံပါတဲ့ငှက် ဟဲဟဲ
Anonymous 27 October 2010 at 10:27
ဂဠုန်ကြီးရယ် ... ငပိချက်ရင်း နဲ့ ငံပြာရည်ပါတခါတည်း ချက်လိုက်ပါအုံး။ :P
ရိုးရိုး 28 October 2010 at 11:50
I hadahair salon nightmare when I last visited ...